'अध्यक्ष नपाएको भन्दै माधव नेपालले पार्टी विभाजन गर्नु गलत हो'- युवराज ज्ञवाली -
‘अध्यक्ष नपाएको भन्दै माधव नेपालले पार्टी विभाजन गर्नु गलत हो’- युवराज ज्ञवाली
प्रकाशित मिति : २०७८, ३ भाद्र बिहीबार
काठमाडौं । नेकपा (एमाले) का उपाध्यक्ष युवराज ज्ञवालीले आफूले माधव कुमार नेपाललाई धोका नदिएको स्पष्ट पारेका छन् । उनले आफूहरुको अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग ठूलो मतभेद रहेको सुनाए । उनले ओलीले संसद् विघटन गरेर प्रतिगमन गरेपनि अहिले आफूहरुले सहकार्य गरेको स्पष्ट पारे ।
आज विहान नेपाली रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भएको कार्यक्रममा कुरा गर्दै उनले हिजो ओलीले संविधान मिच्ने काम गरेकोले आलोचना गरिएको सुनाए । उनले आफूहरु पार्टीभित्रै बसेर अन्तरसंघर्ष गर्ने पक्षमा पुगेको विश्वास दिलाए । उनले आफूहरु एमालेभित्रै अन्तरसंघर्ष गर्नुपर्ने पक्षमा उभिएको पनि सुनाए ।
उनले माधव नेपालकै सहमतिमा दश बुँदे सहमति गरिएको पनि दाबी गरे । उनले भने,‘अध्यक्ष नपाएको कारणले पार्टी विभाजन गर्ने कुरा गलत हुन्छ । दश बुँदे सहमतिमा टेकेर अघि बढ्न सकिन्छ । त्यहीँभित्र अन्तरसंघर्ष गरौं भन्ने हाम्रो विचार थियो । मैले यो कुरा पार्टीका धेरै बैठकहरुमा कुरा राखेको छु ।
हिजोमात्रै पनि मैले उहाँसँग कुरा गरेको थिएँ । तर, उहाँले म अगाडि बढें भन्नुभयो । हिजै दल दर्ता गरिसक्नुभयो ।’
‘पार्टीमा आकर्षण छ, त्यही कारण कमिटी ठूला बने’- बेदुराम भुसाल
खाडीबाट पैसामात्र होइन मिर्गौला रोग बोकेर आउने धेरै छन् : डा. दिव्या सिंह
‘अमेरिकाले एमसीसी फिर्ता लग्यो भने हामी खुशी हुनुपर्छ’- सीपी गजुरेल
‘कम्युनिष्ट बिग्रिए भने कुहिएको अण्डाभन्दा बढि बिग्रिन्छ भन्थे, माधव नेपालको त्यही हविगत हुँदैछ’- सूर्य थापा
‘ज्यानकै परवाह गरेका छैनौं, पद त आवधिक न हो’- महन्थ ठाकुर
‘वीर अस्पताल सुधार्न अब जंगबहादुर नै चाहिन्छ’- डा. जागेश्वर गौतम
‘म राजन्त्रवादी पनि होइन, गणतन्त्रवादी पनि होइन’- रवीन्द्र मिश्र
अब महन्थ–राजेन्द्रहरुको कुनै आवश्यकता छैन, मधेशी जनताले उनीहरुको साथ छोडिसके : महेन्द्रराय यादव